Abavelisi be-Spot Welding Robot-abavelisi be-china indawo yokuthengisa i-Robot ababoneleli kunye nefektri
Ukutshisela indawo kunye neeRobhothi zeMotoman
Izicelo zeRobotic Spot Welding Izicelo zixhaphake kakhulu kwii-OEM zeZithuthi kunye neeTier1 zeevenkile zeZiko, ukuhlanganisa ngokuzenzekelayo imizimba yeemoto kunye neendibano zazo. Sisebenzisene nee-OEM zeemoto ukwenza iirobhothi ezintsha ukuphucula imveliso yevenkile yomzimba, kunye nokuthobela imigangatho yevenkile zomzimba, ekhokelela kwisiseko esifakelweyo samawaka alishumi eeMotoman Robots kwihlabathi liphela. Sinikezela ngebhanti epheleleyo yeemodeli zeerobhothi kunye netekhnoloji efunekayo apha - imithwalo yokuhlawula, ukufikelela, ukudityaniswa kunye neendawo zokubopha zangaphandle / iipakethe zokunxiba kunye nemipu elawulwa nge servo.Kukho icandelo elikhulu lesicelo se-welding kwindawo yoShishino ngokuBanzi (ngaphandle kwezeMoto). I-YASKAWA Motoman liqabane elifanelekileyo lokuqonda izisombululo ze-welding apha.I-SP80, i-SP100 kunye ne-SP165 ziirobhothi ezincinci ezinokuma kufutshane nomsebenzi kwaye zivumele imveliso ukuba iveliswe ngezikhululo eziphinda ziphinde zibone. I-SP165, i-SP210, i-SP215, i-SP250 kunye ne-SP280 ziirobhothi ezitshisayo zewelding ezinonyawo oluncinci, isantya esiphezulu kunye nokuchaneka kokubeka kwaye-ukuba kunyanzelekile-ukufakwa ngaphakathi kwi-7th axis servo guns.
Yaskawa indawo yokuwelda iROTOT MOTOMAN-SP165
Inkqubo ye- Yaskawa indawo yokuwelda iROTOT MOTOMAN-SP165 yi-multi-function robot ehambelana nemipu encinci kunye nephakathi. Luhlobo lwe-axis emi-6 ethe nkqo edityanisiweyo, enomthwalo omkhulu we-165Kg kunye noluhlu oluphezulu lwe-2702mm. Kufanelekile ukuba zilawule iikhabhathi ze-YRC1000 kunye nokusetyenziselwa ukuwelda kwindawo kunye nokuhamba.
Inkqubo ye- Yaskawa Spot Welding Robot Indawo yokusebenza SP210 Inomthwalo omkhulu we-210Kg kunye nobude obukhulu be-2702mm. Ukusetyenziswa kwayo kubandakanya iwelding yendawo kunye nokuphathwa kwayo. Ilungele amandla ombane, umbane, oomatshini, kunye nemizi-mveliso yemoto. Eyona ndawo isetyenzisiweyo yindawo yokuzihlanganisela yendibano yemizimba yeemoto.
Ukuphatha ingalo yeRobot, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi,